Hasambarana Tao Amin’ny Twitter Ho An’ity Rosiana Lehiben’ny Fampielezankevitra Ity Ny Nataon’ireo Mpanohana An’i Trump · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 11 Novambra 2016 3:30 GMT
Vakio amin'ny teny Français, русский, čeština , 繁體中文, 简体中文, عربي, Español, English
Sary: Gage Skidmore / CC 2.0
Raha mbola fanina tanteraka tamin'ny fitsimbadihana nampivanàka vitan'i Donald Trump tao anatin'ny hazakazaka ho filohan'i Etazonia izao tontolo izao, ry zareo Rosiana kosa mijery an'i Amerika miaraka amin'ny fiverenan'ny fitokiana indray hoe namokatra ihany nony farany ny tolona natao nandritry ny taona marobe niadiana tamin'ny ampihimamban'ny media liberalin'ny Tandrefana amin'ny fivezivezen'ny vaovao manerantany.
Amin'io, angamba tsy misy iray faly be mihoatra noho i Margarita Simonyan, lehiben'ny famoahan-dahatsoratra ao amin'ny RT (“Russia Today” fahiny), ilay tena famoahan'i Kremlin ny fampielezankeviny, izay antom-pisiany ny handefa ny fijerin'i Maosko an'izao tontolo izao ho amin'ireo mpanaraka any ivelany.
Ao amin'ny Twitter, nanomboka nanaraka ny fifidianana tahaka ny ankamaroan'ny olona i Simonyan, tamin'ny fianteherana tamin'ireo vinavinan'ireo mpamakafaka, nanantena ny handresen'i Hillary Clinton. Iray tamin'ireo bitsika voalohany nalefan'i Simonyan tamin'ny andron'ny fifidianana no nanambara fotsiny hoe nodimandry ny demaokrasia.
Mandria am-piadanana ry Demaokrasia
Arakaraky ny naha-nazava tsikelikely ny mety ho fandresean'i Trump tao anatin'ilay hazakazaka, niova ny fomba fanehoankevitr'i Simonyan tao amin'ny Twitter, niala tamin'ny faharavàna nankany amin'ny firavoravoana. Nanomboka nanao izay hahitàna sainampirenena Amerikana mihitsy aza izy, ary nampanantena fa hamatotra izany amin'ny fiarany, maika ery izy ny hanome voninahitra ilay fifidianana iray, izay ora maro talohan'izao, nofaritany ho toy fambara ny fandevenana ny demaokrasia.
Te-hitondra fiara mamakivaky an'i Maosko aho androany, hiaraka amin'ny saina Amerikana eo amin'ny varavarankelin'ny fiarako. Raha afaka mahita saina aho. Miaraha amiko! 🙂 Mendrika izany ry zareo [Amerikàna].
Ekena, araka izany dia hamily fiara tahaka izao aho androany: eo amin'ny varavarankely iray ny sainan'ny firenentsika, ary eo amin'ny iray hafa ny an'ny Amerikana no apetrako. Izaho no ho endriky ny fitiavana, fandriampahalemana ary firindràna. Toy ny mialoha làlana.
Ary na ilay trosanà labiera roa vata— tambin'ny fahavoazany tamin'ny filokàna, izay nifidianan'i Simonyan an'i Clinton—tsy ampy hampangatsiatsiaka ny fientanentanam-panahin'ilay lehben'ny famoahan-dahatsoratra.
Eto aho vao tonga saina hoe voa labiera roa vata aho !
Toy ireo marobe mpanaramaso tao Etazonia sy nanerana ny tany, nadikan'i Simonyan ny fandresena azon'i Trump ho toy ny fandàvana matanjaka ny toetoetry ny zavamisy sy ilay antsoina foana hoe Marimaritr'i Washington, rehefa ny politikan'i Etazonia any ivelany no resahana.
Ho an'i Simonyan, io no porofo fa ny betsaka tamin'ireo Amerikàna mpifidy dia leo sy tofoka amin'ireo media mahazatra, ny fahamaroan-kolontsaina, ny fifanakalozana malalaka ary ny fitsabatsabahana any ivelany.
Corbyn. Brexit. Trump. Mbola misy fanontaniana ve? Leo ny ‘establishment’ (vondron'olona mampivangongo ny fahefana ho eo am-pelatanany) izao tontolo izao, ny laingany, ary ireo media be dehaka ananany.
Rehefa ny media sy ny manampahefana no nandany taona maro namafy soatoavina izay tsy ananan'ny fiarahamonina fahavononana akory ny hanaiky azy, amin'ny fanazavana amin'ny fiarahamonina fa mitoboka sy votsa saina loatra izy, dia mandresy i Trump.
Leo ady ny vahoaka. Rerak'ireo media. Reraky ny liberalisma mitratrevatreva . Leo mpifindramonina. Na tsara, na ratsy, ireo no zavamisy.
Resaka tsy loa-body ao anatin'ny bitsika fankalazàn'i Simonyan ny hevitra hoe mpandresy ihany koa ny RT, ilay trano famoahana vaovao misy azy, satria io mizara fomba fijery manohitra ny ‘establishment’ izay toa nanjaka be tao anatin'ity fifidianana tao Etazonia ity.
Ireo fantadaza mpanohana an'i Hillary Clinton koa nàka ilay hevitra hoe ireo Rosiana mpitsikilo toa an'i Simonyan dia tomponandraikitra tamin'ny fandresena azon'i Trump tamin'ny fifidianana.
Ohatra, Michael McFaul, masoivohon'i Etazonia fahiny tany Rosia ary feo mpanohana mahafatrapo tamin'ny fampielezankevitr'i Clinton, dia nanondro an'i Maosko ho nanodinkodina ny sain'ny Amerikana mba hifidy an'i Trump. Ao amin'ny Twitter, niarahaba tamin'ny fomba vosobosotra ireo olona mifandray amin'i Kremlin i McFaul, isan'ireny i Simonyan, izay avy hatrany dia namerina nibitsika ilay hafatra tao amin'ny kaontiny.
Arahaba ry @PutinRF @M_Simonyan @SputnikInt @Zhirinovskiy @KatasonovaMaria
Rehefa mijery ny ampitso, mazava be ny fananan'i Simonyan fanantenana avobe momba izay ho azon'ny Filoha Trump hatao ho fampivoarana ny fifandraisan'i Etazonia sy Rosia, miaraka fanomezana ireo toerana jeopolitika marobe ho an'i Maosko izay mety tsy azo eritreretina akory raha i Hillary Clinton no nandresy tamin'ny Talata.
Raha eken'i Trump hoe antsika i Krimea, foanany ireo sazy [ara-toekarena], tonga aminà fifanarahana iray momba ny ao Siria, ary manafaka an'i Assange, dia handeha hisotro ronono aho. Satria ho tontolo iray mahafinaritra no hisy.
Ary ahoana ny momba ilay “Mandria am-piadanana ry Demaokrasia”? Lazain'i Simonyan fa misy vaovao tsara ny momba izay lafiny izay :
Max Seddon: Izao no izy, ary vao omaly mihitsy ianao no niteny hoe “Mandria am-piadanana ry Demaokrasia.” Nitsangana tamin'ny maty angaha izy io?
Margarita Simonyan: Nitsangana tamin'ny maty izy! 🙂
21 ora izayEoropa Andrefana